U wareejinta saacadaha DIF ee CPF: xusuusin
Laga soo bilaabo 2015, koontada tababarka shaqsiyeed (CPF) waxay beddeleysaa xuquuqda shaqsiyeed ee tababarka (DIF).
Dadka shaqaaleeyay 2014, waa masuuliyadooda inay qaadaan tilaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay xuquuqdooda ku hoos wareejiyaan DIF koontadooda tababarka shaqsiyadeed. U wareejinta CPF ma ahan mid otomaatig ah.
Haddii shaqaaluhu aysan qaadin tillaabadan, xuquuqdooda la helay ayaa si joogto ah u lumaya.
Waa inaad ogaataa in markii hore, wareejinta ay aheyd in la sameeyo ugu dambeyn 31-ka Diseembar, 2020. Laakiin waqti dheeri ah ayaa la siiyay. Shaqaalaha ay khusayso waxay haystaan ​​illaa Juun 30, 2021.
U wareejinta saacadaha DIF ee CPF: shirkaduhu way u sheegi karaan shaqaalaha
Si dadka xuquuqda leh ay uga warqabaan DIF, Wasaaradda Shaqada waxay bilaabaysaa olole macluumaad oo ka dhex socda shaqaalaha, iyo sidoo kale shirkadaha, xiriirada xirfadlayaasha ah iyo la-hawlgalayaasha bulshada.
Xaaladaha qaarkood, illaa iyo Diseembar 31, 2014, shaqaaluhu waxay heli karaan illaa 20 saacadood oo ah xaq u lahaanshaha DIF sanadkiiba, illaa ugu badnaan xaddiga 120 saacadood oo isugeyn ah.
Wasaaradda Shaqada ayaa qeexeysa in qofka aan waligiis isticmaalin xuquuqdiisa, tani ay matali karto ...
U wareejinta xuquuqda shaqsi ee tababarka koontada tababarka shaqsiga: ugu dambayn Juun 30, 2021 July 10th, 2021Tranquillus
READ Maareynta Mashruuca: Hordhaca Gantt ee Excel
horeShirkadda: shaqaaluhu mar dambe ma awoodi doonaan inay xirtaan waji-shareerka guryaha lagu sameeyo
socdaMushaharka: maxaa isbeddelaya Janaayo 1, 2021